Cervical Polyps - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
“ဆရာရေ ရာသီမမှနျလို့ ဆေးခနျးသှားပွတာ သားအိမျခေါငျးမှာ အလုံးရှိလို့တဲ့”
“ဆရာရေ အမြိုးသားနဲ့ အတူနပွေီးတိုငျး သှေးဆငျးနတော အိုဂြီနဲ့ ပွတာ သားအိမျလမျးကွောငျးမှာ အလုံးတညျလို့တဲ့”
ထိုထိုသော ပွောလာကွသော မေးလာကွသော အမြိုးသမီးမြားရဲ့ အမေး စကား
မြားကို ဒီဆောငျးပါးလေးမှာ ပွောပွလိုကျပါတယျ ။
သားအိမျခေါငျး အလုံးဆိုတာ ဘာလဲ?
သားအိမျခေါငျးအလုံးဆိုတာ သားအိမျခေါငျးမှာ အလုံးတညျတာပါ။တကယျတမျး တော့ သားအိမျနဲ့ မှေးလမျးကွောငျးကို ဆကျထားပေးတဲ့ သားအိမျလမျးကွောငျး cervical canal မှာ ဖွဈတဲ့ အလုံးတိုငျးကို ဆိုလိုတာပါ။ဒီအလုံးလေးဟာ အနီရောငျ ၊ပနျးရောငျ ၊ဒါမှမဟုတျ အညိုရောငျကလေးတှေ သနျးနနေိုငျပါတယျ။အရှယျအစားအားဖွငျ့ မီလီမီတာကနေ စငျတီမီတာလောကျပဲ ရှိတတျပါတယျ ။
-အသကျ ၂၀ကြျော အမြိုးသမီးတှေ
-ကလေး ယူဖူးတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ မှာ အဖွဈမြားပါတယျ။ရာသီသှေး မပျေါသေးတဲ့ မိနျးမငယျလေးတှမှောတော့ မဖွဈတတျပါဘူး
ဘယျလို လက်ခဏာတှေ ခံစားရတတျသလဲ?
အမြားအားဖွငျ့ လက်ခဏာ မပွတတျ ။ပွမယျဆိုရငျလညျး အောကျပါအတိုငျးပါ:
-ရာသီလာရငျ ပုံမှနျထကျပိုပွီး သှေးဆငျးခွငျး
-ရာသီလာတဲ့ အကွိမျ စိပျခွငျး
-မိနျးမကိုယျမှ အဖွူဆငျးခွငျး ( အနံ့ နံတတျ )
-နာတာရှညျ သားအိမျခေါငျး ရောငျရမျးခွငျး
-သားအိမျခေါငျးရှိ သှေးကွောကလေးမြား ပိတျခဲခွငျး စတာတှကွေောငျ့ဖွဈတတျပါတယျ။
သားအိမျလမျးကွောငျးမှာ အလုံးတှရေ့ငျ ဘာဆကျလုပျရမလဲ?
-နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားနဲ့ ပွသပါ ။
-သားဖှားမီးယပျအထူးကုမြားနဲ့ တိုငျပငျပါ ။
-ဆရာဝနျမြားက လိုအပျရငျမိနျးမကိုယျကို စမျးသပျစဈဆေးမယျ၊သားအိမျခေါငျး အခြှဲစယူမယျ။သားအိမျခေါငျးအလုံးမှ အသားစယူပါလိမျ့မယျ။ကငျဆာဟုတျ ၊မဟုတျသိနိုငျဖို့ပါ ။
-ဘာမှမဖွဈရငျ ၊အလုံးသေးရငျ စောငျ့ကွညျ့ပါလိမျ့မယျ ။
-ဆီးစပျကိုကျခွငျး ၊လိငျဆကျဆံစဉျ နာကငျြပွုခွငျးမြားရှိက အကိုကျအခဲပြောကျဆေး သောကျနိုငျတယျ ။
-အလုံးကွီးရငျဖွဈဖွဈ ၊သှေးဆငျးတာမြားရငျဖွဈဖွဈ သားအိမျခေါငျးအလုံးကို ခှဲစိပျပွီး ဖယျရှားပေးပါလိမျ့မယျ ။
“ဆရာရေ ရာသီမမှန်လို့ ဆေးခန်းသွားပြတာ သားအိမ်ခေါင်းမှာ အလုံးရှိလို့တဲ့”
“ဆရာရေ အမျိုးသားနဲ့ အတူနေပြီးတိုင်း သွေးဆင်းနေတာ အိုဂျီနဲ့ ပြတာ သားအိမ်လမ်းကြောင်းမှာ အလုံးတည်လို့တဲ့”
ထိုထိုသော ပြောလာကြသော မေးလာကြသော အမျိုးသမီးများရဲ့ အမေး စကား
များကို ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ပြောပြလိုက်ပါတယ် ။
သားအိမ်ခေါင်း အလုံးဆိုတာ ဘာလဲ?
သားအိမ်ခေါင်းအလုံးဆိုတာ သားအိမ်ခေါင်းမှာ အလုံးတည်တာပါ။တကယ်တမ်း တော့ သားအိမ်နဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းကို ဆက်ထားပေးတဲ့ သားအိမ်လမ်းကြောင်း cervical canal မှာ ဖြစ်တဲ့ အလုံးတိုင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ဒီအလုံးလေးဟာ အနီရောင် ၊ပန်းရောင် ၊ဒါမှမဟုတ် အညိုရောင်ကလေးတွေ သန်းနေနိုင်ပါတယ်။အရွယ်အစားအားဖြင့် မီလီမီတာကနေ စင်တီမီတာလောက်ပဲ ရှိတတ်ပါတယ် ။
-အသက် ၂၀ကျော် အမျိုးသမီးတွေ
-ကလေး ယူဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မှာ အဖြစ်များပါတယ်။ရာသီသွေး မပေါ်သေးတဲ့ မိန်းမငယ်လေးတွေမှာတော့ မဖြစ်တတ်ပါဘူး
ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရတတ်သလဲ?
အများအားဖြင့် လက္ခဏာ မပြတတ် ။ပြမယ်ဆိုရင်လည်း အောက်ပါအတိုင်းပါ:
-ရာသီလာရင် ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး သွေးဆင်းခြင်း
-ရာသီလာတဲ့ အကြိ်မ် စိပ်ခြင်း
-မိန်းမကိုယ်မှ အဖြူဆင်းခြင်း ( အနံ့ နံတတ် )
-နာတာရှည် သားအိမ်ခေါင်း ရောင်ရမ်းခြင်း
-သားအိမ်ခေါင်းရှိ သွေးကြောကလေးများ ပိတ်ခဲခြင်း စတာတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သားအိမ်လမ်းကြောင်းမှာ အလုံးတွေ့ရင် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ?
-နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနဲ့ ပြသပါ ။
-သားဖွားမီးယပ်အထူးကုများနဲ့ တိုင်ပင်ပါ ။
-ဆရာဝန်များက လိုအပ်ရင်မိန်းမကိုယ်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမယ်၊သားအိမ်ခေါင်း အချွဲစယူမယ်။သားအိမ်ခေါင်းအလုံးမှ အသားစယူပါလိမ့်မယ်။ကင်ဆာဟုတ် ၊မဟုတ်သိနိုင်ဖို့ပါ ။
-ဘာမှမဖြစ်ရင် ၊အလုံးသေးရင် စောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ် ။
-ဆီးစပ်ကိုက်ခြင်း ၊လိင်ဆက်ဆံစဉ် နာကျင်ပြုခြင်းများရှိက အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်နိုင်တယ် ။
-အလုံးကြီးရင်ဖြစ်ဖြစ် ၊သွေးဆင်းတာများရင်ဖြစ်ဖြစ် သားအိမ်ခေါင်းအလုံးကို ခွဲစိပ်ပြီး ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ် ။